MUUQAAL: Maamuladda Galmudug iyo Ahlusuna oo Heshiis Buuxa gaadhay iyo Sh.Shaakir oo Wasiir loo magacaabay | Kalshaale
MUUQAAL: Maamuladda Galmudug iyo Ahlusuna oo Heshiis Buuxa gaadhay iyo Sh.Shaakir oo Wasiir loo magacaabay
Dec 6, 2017 - 25 Aragtiyood
Muqdisho (Kalshaale) Maamulada Ahlusuna iyo Galmudug ayaa goor dhow si rasmi ah ugu kala saxiixday magaalada Muqdisho heshiis lagu mideynayo oo dhowaan ay ku gaareen wadahadalo ka dhacay dalka Jabuuti.
Munaasabada saxiixda heshiiskan oo ka dhacday xarunta madaxtooyada Somalia ayaa waxaa goob joog ka ahaa Masuuliyiin ay ka mid yihiin Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo, Wasiirka Arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar, Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdi Faarax Juxa iyo xubno kale, waxaana qodobada labada dhinac ay saxiixeen u qornaayeen sidan:-
labadan yaa daanyeera ma shaakir mise xeef bal arinka wax ka dheh midkale labadan nin ma ilsla habargirbaa mise midbaa wara.warood ah
soo soco cadaado caydh
Xaajo Garteeda Dibada Loo Duushey,)
Iney Darartoo, Dabarkeeda La Durduurto,
Mawduuc Laguu Soo Dedey, Dacaar Deebaaq
Ayey La Dibirsan Tahayeeeeeeeeeeeeeee,)
Dadkan wali puntland aa kasoo uree daraawiieh mj aa magacaas keensadey.
Dayroow, Duul isku Diirraaa, Misana Isdiidey,)
Dawo Dabiib, Dayro U Daaa, Dird isdiidey, Diktoorada,
Dunidu, Ma DabiibaanNeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,)
Abaar Diirataaa, Degayeee, Meel Cadawgii, Soomaali,
Derinta, Daadsadey, Kala Didii Mooyeee, Isdeysi,
Dayro U Daayeyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel)
waxaan aad ula yaabay qodobka 11aad
– qof la ogyahay inu argagaxiso ama burcad yahay kama mid ahan doono mamulka cusub ee dhismaya kkk macnehedu waa hada ayay mamulada kujiraan argagaxiso iyo burcad. ala maxay mooryaan been isu shegtay
mida kale ragan qodobada qortay daacad isuma aha wayna is gaadayaan qalalsana kama fursan doonto,laba mid unbay noqon.
1. inu xaaf dhowr beri kadib dhoho shakir wan caydhiyay awooda mamulkoo dhana sida kuka warego iyo
w. in shaakir afgambiyo xaaf iyo galmuudgba oo isagu mesha uhadho.
mida labaad ayayna udhowdahay waayo xaaf xildhibaanadii hore galmudug ayuusanba kaksoni ka haysanin oo wakay caydhiyeen xildhibajo kaloo ahkusuna aha o lagu daray iyo madaxwayne kuxigenaka iyo gudoonka barkamanka oo awalba kusii kacsana
Mooryaanta suufiyada waa urur argagixiso oo wadar beeleed hunguri siyaasadeed ku doonay ah.
Waar waxani waa maamul goboleed maamul goboleed ku dhex jira.
Si kastaba waxaa muuqata argagixisada mooryaantii xerta timawaynta inay hungurigii siyaasadeed ee caayi jirtay, daba dhilif Axmaarna ku ahayd immainka u soo bowda qaawisaty.
Argagixisada suufiyada haddii ay arrinkan lagu heshiiyay ay hirgeliso waxay ka caqli badnaan doontaa argagixsa kale ee la yidha Shabaab.
Si kastaba waxaan soo dhowaynaynaa in Galmudug mar un ka hana qaaddo maamul beeleed goboleed oo la mid ah Pudhyland, So called Somalilayn, Jubbaland, Hirshabeelle iyo K galbeed, si wax un nabad ah loo helo.
Maxamud, war kuwani miyey waalan yihiin? ma hal gobol oo xiitaa aan lahayn dhul beereed ayey waxaas oo jago ah u magacaabayaan? war fadaraalka sidaas uma aanaan samaynin ee caqli kudara oo gobolkan kudara hir-shabele si ay u noqdaan 3 gobol oo dhaqaale ahaan shaqaalahooda wax siini kara, chief of ministers kuye! kkkkkkkk
War hada waxii ka dambeeya wadanka oo dhan waxaa laga dhigayaa one man one vote oo majiri doono maamul goboled wax lagu qaybsan doono ee si aad shaqaalaha mushaar ugu heshaan gobolkan kudara hir-shabele kkkkk
:ALI ZUBEER kkkkk ereyga aan ku qoslayaa waa si un wax nabad ah loo helo meesha ma taqaan horta.
1-Waa gobolada dhexe wax dhaqaale ah ma lahan dhiigga dadkana waa lagu faanaa
2-Meesha ay naga soo gaartay NIN TOOXSI mean boob aan diin ku fahiyan.
Calaa kuli xaal waxaa cajiib ah meel aan waxba oolin in intaa oo dhib ah laga maro somali in ay daanyeer ka liidato halkaa ayaa kaag marqaati ah war aaway ninkii daanyeerta ku sheegi jira.
Galmudug dhaqaale ma leh.
Galmudug magaalada ugu weyn uguna dadka badan waa Caabudwaaq
Galmudug dadku wuu wada waalan yahay.
Waxaan tagay 2016kii waxaan isu maray Cadaado oo aan igu tagay Abtigay oo aan muddo 26 sanno arkin xamarna ka yimid oo aan is daba marnay,waxaan ka xishooday magaaladdiii awoowgay ka yimid 1920-30 Caabudwaaq in aan tagin inkastoo wax dad ah aanay iga joogin waxaa imartiqaaday ina habreedkay oo dhuusomareeb degan waxaan soo maray guri ceel balanbale waxaa iisoo baxay Galmudug walaahi magaalooyinka yaryarka ah ee Jubaland ama Puntland ama Koonfur galbeed ama Hirshabeele ayaa ka camiran ka dhaqaale roon waa ZERO.Meeshaa ayaa waxaa lagu leeyahay 150MP 60 wasiir kkkkkk 3 madaxweyne ha yeelato.
@ABSAMEBOY meesha waxaa u haraya abtigay sh shaakir sababtoo ah HB 70% waa shaakir dad iyo dhaqaaleba iyagaa isku haysta maanta Xaaf dad iyo dhaqaale waa ZERO ka beel ahaan reer cadaado ayaaba dhama markaan xamar fiiriyay.
FALAASHAHA ITOOBIYA DALKAAN MAY NAGU QABSADAAN DAD MA NIHINE HG IYO MJ DALKAAN ILLAHAY HAKA QABTO
Maxamud, tooshkii jugle kkkk sxb ehlu suna waa ceyr, ceyr-na horay ayey u qaateen cadkoodii ee hadana ma waxay wax ku rabaan ehlu suna? War gobolkani somali oo dhan buu ka dhaxeeyaa ee cadaalada yaan laga tagin oo ceyr sadkiisii horay buu u qaatay ee ehlu-sunada aad wax ku rabtaan joojiya kkkkkkkkkkk
ali subeer waa gadh-dhuub yacni waa dadka sarwaalka gaabsada, waana sababta uu u caayi culimada sharafta leh iyo sheekh shaakir ee sidaas ula socda kkkkkk
ILAAHOW uu melmaro Heshiiska Ahlu sunnah & Galmudug oo noo soo celi Gobolki GALGADUUD.
☆Garqaad; “Hadalka Mr BaHaL ayaa dhameeyay xamar ninka degan ama ku dhashay ayaa maamulkeeda xaq u leh
NO more in xasan abshir oo kale uu guverno ka noqdo xamar”.
👳Garqaad adeer, waxaa ila qummanayd Intaadan Xasan Abshir u TARXIILIN Puntland inaad taariikhdiisa WAX kala socoto. Waxay noo joogtay in ruuxa madax ka noqona Degmo XAMARA inuu ku dhashay ama ku soo barbaaray. Waxaan kuu xaqiijina inuu Xasan Abshir ku soo koray XAMAR CADDE oo waxaan bartay isagoo Dugsiga Hoose dhigta. Marka adeer Koytada waxaad doonto ka yeel BALSE ha u raacin reerku u dhashay, aniguba waxaan ku dhashay; ‘DDSI, Kililka 5naad, Ogadeenya ‘middaad doonto ugu yeero’ cid aa kaa REER XAMAR-DAYA AHNA isma lihi. WAX ISWEYDIIN MA XUME WAX ISWEYDAARISA DARAN.
♤Dood Hufan. WBT
soomali jecel daciif liita aya tahay oo qabyaalad xunu ka buuxdo galmudug dešavalo dhul qurux badan magaaloyin camiran intabo way ledahay an ku bare buug so qado iyo qalin cabudwaq magaaliyib badan ata ka dad kana qurxoob oo galmudug ah
jugle dhulka galmudug hada wa wada beer gorme laga tahay wixi hore so baro beeraha galmudug ader dhulku inkasto wabi lahayn hadaba beerasha,ad ayu ugu fican yahay wana la tijaabiyay Hada waxa dhiman in biyo xireen,la sameeyo
Waan soo dhoweynaynaa walalaheena GALMUDUG hadii ay hishiishkii qaateen.
NABAD wax ka fiican ma jirto. ILAAHI WEYNAA baa ka kaxeeyey DAM-JADIID, oo isku diri jirtay.
SOOMAALIDA TIRAAHDA: ++++ NABAD AA NAAS LA NUUGO LEH, EE HANBARADEENAA ++++
Nabadaas la qaatay oo maantay ay qaateen reer GALGADUUD, soomali oo dhan ay dan u tahay, gaar ahaan:
Ani waddankaas oo dhan lug aan ku maray. Laga soo bilaabo min GAALKACAYO ilaa iyo Xaduudka DHOOBLEEY.
Marka, GALGADUUD IYO MUDUG waa isku mid. Waa waddan Keel kaliya lagu dhaqi karo.
Xoolo kale laguma dhaqi karo. Ari Laguma dhaqi karo. Ari haddii maqashaan wuxuu u baahan yahay CALEEEN. Caleena buur aa laga helo.
Lo’ haddi aad maqashaan waxeey u baahan tahay DAREEMO. DAREEMUNA waxaa laga helaa DOOXOOYIN IYO BIYO ISKU XIDHAN. Galgaduudna Dooxooyin iyo Biyo midna ma laha. Waa oomani aan biyo lahayn.
EDDO hadii aad dhaqanaysaa, waa in aad u haaysaa GEED GAABAN iyo HAWO QABOOW. Galgaduud iyo Mudug taas waxaa laga helo xagga BADDA, ama XEEBAHA, sida XARADHEERE amd HOBYO.
Waana maqalay in halkaas fadhiyaan EEDO farabo badan.
MARKA, sida aad loo hishiiyey, ma aha sida saxda ah. MADAXWEYNE XAAF iyo SHAAKIR, waxeey ahayd in ay dadka iyo dalka u turran, oo wax macquul ah ku hishiiyaan.
Labaduba hishiishka dhab kama ah, midba midka kale uu leeyahay ratiga ku kacso, hadhowna ka baacso.
Laakeen, waa soo dhoweynaynaa hishiishkaas.
AAN WADA HADALNO, waxeey ka fiican tahay aan dagaalano.
waryaa MUNA CADEEEY ma ila socotaa…
Salaan ka dib, hadday Muna u aragto dhulkeeda barwaaqo maxaad uga qalbi jabin!
Aniga waxaan aaminsanahay Somalia meel lagu noolaan katin oo la beeran karin kuma taal.
Wadamo roob ka di’in ayaa biyo ceel wax ku beerta waaba meel 2 jeer sanadka toob ka da”o. Gu iyo dayr.
May biyahaas xirtaan.
Aqli xumo iyo bililiqo doonteen waa meesheeda laakiin dhulku dadka ku filan,❄
Tusaale Puntland ilaa maanta 16 biyo xireen sameysteen. Mana dhawo ilaa tuulo kasta abaar laga aqoon gaarto.
War hore haloo socdo yaan la isku mashquulin.🌎
barawaani anigu galgaduud babur ayan ku maray dhul jurić badana wan ku aragtay mudugna wabo wada dooxo iyo.dhul beeraha ku fican marka shekada raqiiska iska yare
sixid dhul qurx badan ayan ku arkay
Hogaamiyaha Galmudug Mr. Xaaf, qalad ayuu sameeyay, kaas oo ah, dad qaldan ayuu u tanaasulay. Ceeyrka suufiyaasha ah, qabiilo kale ayeey adoon u yahiin oo ku shaqeeysta. Mana aheeyn in loo tanaasula, qof qaswadde ah, oo isbaaro u dhigtay Somaliya oo dhan, gaar ahaan maamulka Galmudug.
Dowladda dhexe, laftigeeda madaxdeeda waa eey ku qaldanyahiin, in dad qaldan aanan runta loo sheegin oo madaxa loo salaaxa.
Anyway, hadeer, Xaaf marka Dhuusamareeb lageeysto, handadaad iyo karaamo la’aan ayaa lagula dhaqmi doonaa. Ixtiraamkii, iyo tolnimadii, iyo islaanimadii uu ku arkay degamada Cadaado, iyo dadkii martigaliyay dowladda maamul beeleedka Galmudug, ma’uu ka heli doona daanyeeradaas Guriceel iyo Dhuusamareen isbaarada u taal.
Waa iyada oo la’isku dhiibay “black mailing” iyo handadaad siyaasadeed.
Xaaf si dagdag ah ha’ugu guuro caasimada maamulka Galmudug, ee Dhuusamareen.
Labbo bil kabacdina waad arki doontaan iyada oo farqaha la’isku dhaganyahay.
Daanyeero aanan caqli laheeyn ayaa horbooda both, Galmudug, iyo dowladda dhexe, sidoo kale, mamaulada kale ee qabiilka wax saas u sii buuran ma dhaamaan.
Waa dal iyo dad eey kuwii ugu daanyeersanaa ugu caqliga liitay horboodayaan. Bal intaas oo jaggo oo been ah dadka kashaqeeyn doona, halkee baa mushaar looga keeni. Oh yeah, cid kasta oo ku shaqeeysan karta ayaa lasoo tuugi. Daanyeero.